Global Voices teny Malagasy » Hanery amin’ny hanaovan’i Frantsa ny resaka ilaina momba an’i Afrika ve ny hanihanin’ny Mondialy? · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 29 Jolay 2018 6:54 GMT 1	 · Mpanoratra Lova Rakotomalala Nandika Andriamifidisoa Zo
Sokajy: Afrika Mainty, Eoropa Andrefana, Karaiba, Alzeria, Frantsa, Goadelopa, Goiana Frantsay, Kamerona, Madagasikara, Maraoka, Martinika, Rwanda, St. Barthélémy, St. Maarten, Fanatanjahantena, Fifandraisana iraisam-pirenena, Foko sy Fiaviana, Media sy Fanoratan-gazety, Mediam-bahoaka, Tantara, Ny Tetezana - The Bridge
Nitsiky aho tamin'ny voalohany nahita ny sary-sy-soratra  tamin'ny randram-baovaoko Twitter. Tsy vitan'ny hoe nahazo ny amboara Mondialy 2018 i Frantsa, fa nizara ny hafaliany ihany koa ny Afrikana aty amin'ny kaontinanta ary nanao izay hampisongadina ity lanonam-panatanjahantena ity ho misy antom-pifaliana fa misy anjara fandreseny ihany koa ao. Amin'ny maha-sady olom-pirenen'i Madagasikara no maha-olompirenen'i Frantsa ahy, izany no fotoana “nahazoako ny mofomamiko sy nihinanako izany koa”. Nampanaintaina ny lalao famaranana, satria nanjaka ny Kroaty, saingy rehefa naneno ny kiririoka famaranana, feno fifaliana tao amiko tokoa aho satria nody ventiny ny rano natsakain'ityekipa tanora miasa mafy dia mafy ity tamin'ny nahazoany ny amboara faratampony.
Toy ny ravidraviny ivelany izany tamin'ny voalohany, fa nivadika ho sary-sy-soratra an'aterineto  nifampizarana in'arivony manerana an'izao tontolo izao izany. Dia lasa toy izao izany avy eo:
Nahazo ny Mondialy i Frantsa fa fandresen'i Afrika ihany koa ny fandreseny .
Fandresena ho an'i Frantsa io: Teraka tao Frantsa avokoa izy rehetra ary tsy mitsahatra ny mamerimberina ny fitiavany sy ny hambony ho an'i Frantsa . Tsy misy isalasalana izany. Tahaka ny fahadalàna ny mbola mamerimberina izany, saingy rehefa hita ny resabe any amin'ny sehatra sasantsasany, dia tahaka ny tsy maintsy atao ihany izany (tahaka ny nataon'ny  filohan'i Etazonia teo aloha Obama).
Tahaka ny ankamaroan'ny sary-sy-soratra, saika natao tao anatin'ny fanalana azy daholo izany, tahaka ny nataon'i Trevor Noah . Fa amin'izay fotoana izay ihany, nosoritany ny fahalalana tsotra mbola tsy maintsy atrehin'i Frantsa—tanjaka ny fimaroana ary misy ireo taranaka mpifindramonina avy any amin'ny zanatanin'i Frantsa taloha. Tahaka ny hanihany mahafinaritra, nilaza fahamarinana sasantsasany sarotra atelina momba an'i Frantsa i Noah. Ary taorian'izany dia tsy hitan'ny Frantsa intsony izay mampihomehy amin'izay hanihany.
Talohan'ny lalao famaranana, feno fanehoan-kevitra ny forum an'ireo elatra farany havanana ara-politika milaza fa ny tena Eoropeana avy any Kroasia no hitan-dry zareo ho akaiky azy kokoa  noho ny ekipa frantsay amin'izao fotoana izao. Taorian'ny famaranana, nisy fomba fijery azo iadian-kevitra mampanahy avy amin'ny vondrona hafa tsy faly, nanoratra taratasy  tany amin'i Trevor Noah amin'izay dikan'ny hoe mainty any Frantsa ny Ambasadaoron'i Frantsa any Etazonia, Gérard Araud:
Mila fandinihana akaiky kokoa ny fanambaràna hoe “mitsipaka ny maha-Frantsay azy ianao“. Namoaka ny mari-panondroana maha-Afrikana azy  ao anatin'ny fahamatorana mihoatra noho ny taonany i Kylian Mbappé, ilay tanora mahay nahomby tamin'ny fampidiram-baolina efatra tao anaty fanafihana tsara lamina nataon'i Frantsa tao anatin'ny Mondialy:
Didier Deschamps, mpanazatra ny ekipa frantsay izay nanana anjara toerana lehibe tamin'ny famolavolana ireo mpilalao tanora manantalenta ao aminy ho vondrona iray tsara rindra nanambara iza omanaraka izao momba ny fifandraisan'ny ekipa amin'i Afrika :
Azoko ny fanahian'i Araud. Raha tsara amin'ireo fomba fitenin'ny  sasany avy amin'ny elatra havanan'i Frantsa , tsy hahita ity fandresena miezinezina manan-tantara ityny fiakaran'ny fihetseham-po fasista mametraka fototra fa tsy “tena Frantsay ” ireo mpilalao ireo. Nasehon'ireo mpanao matoandahatsoratra any Italia  sy any Espaina  ihany koa ny fijery fa tsy dia tena Eoropeana loatra ny ekipa frantsay ka tsy dia mendrika ankalazaina loatra .  Ary nandao ny ekipa Alemà ihany koa ilay mpilalao baolina fandaka Mehmet Ozil vao haingana teo noho ny fanehoan-kevitra manavakava-bolonkoditra  momba ny fiaviany Tiorka. Koa azoko ny ahiahy saingy tokony ho fantatr'i Araud fa amin'izao fotoana izao ianao tsy manakana ny fisandratan'ny fasisma amin'ny alalan'ny fanomezam-bahana ireo teboka firesaky ry zareo.
Nampianatra antsika ihany koa ny Tantara fa tsy nahavita nampihemotra ny fanavakavaham-bolonkoditra  ny fahazoan'i Frantsa ny mondialy. Tsy ela taorian'ny fientanentanana nanaraka ny fandresena tamin'ny taona 1998, nahozongozon’ ny fandresen'i Jean-Marie Le Pen  manoloana ny favori—sady praiminisitra teo aloha—Lionel Jospin ka nahafahany nifaninana tamin'ny fihodinana faharoa tamin'ny fifidianana ho filoham-pirenena taona 2002  i Frantsa. Io Le Pen io izay nilaza hoe: 
Na ho ela na ho haingana, tsy maintsy manaiky isika fa raha marokolontsaina sy marofoko ny ekipam-pirenena frantsay amin'ny football, dia tsy izany kosa ny sangany ara-politikan'i Frantsa. Tsy mitahiry antontanisa amin'ny fandraisana anjaran'ny vitsy an'isa eo amin'ny sehatry ny asa i Frantsa saingy miharihary mampangirifiry fa ankavitsiana ny fisian'ny fisoloantena mainty hoditra  eo amin'ny sehatry ny asam-panjakana frantsay sy ny politika.
L’ambiance ?? mood@telefoot_TF1  @equipedefrance  #fiersdetrebleus  #worldcup2018  pic.twitter.com/qNg1VE4aTH 
Nanomboka tamin'ny taona 1900 ka hatramin'ny manodidina ny taona 1960, nihazohazo tambonin'ny zanataniny tao Afrika Andrefana sy Madagasikara i Frantsa, saingy zavatra mampiady hevitra hatramin'ny ela ny fotoam-panjanahantany. Mbola tsy nekena amin'ny maha-heloka bevava azy, ohatra, ny fandripahan'olona tao Alzeria , Madagasikara  ary Rwanda . Izany tsi-fisian'ny fanenenana izany no misoroka ny firenena handray tanteraka ny fimaroana ao aminy, ary mifandrohy izany amin'ny fifanenjanana ara-bolonkoditra misy amin'izao fotoana sy ny tsy fisian'ny fimaroana eny amin'ny tontolo izay tena mila izany.
Saingy aleon'ny solontenan'ny Repoblika miady hevitra amin'ny mpampihomehy momba ny firafitry ny ekipan'ny baolina fandaka. Gadran'ny fomba fijery amin'izay tokony ho endrik'i Frantsa tafaray ny Ambasadaoro Araud, fomba fijery tsy mahita ny fifamatorana akaiky eo amin'ny maha-Afrikana sy ny maha-Frantsay. Ny miaramila afrikana an'arivony maty  ho amin'ny fanafahana an'i Frantsa  tamin'ny taona 1916 sy taona 1944  no afaka manamafy izany.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2018/07/29/123858/
 sary-sy-soratra an'aterineto: https://twitter.com/footballmemesco/status/1018544252060602369?lang=en
 fandresen'i Afrika ihany koa ny fandreseny: https://starecat.com/congratulations-to-france-the-1st-african-team-to-win-the-world-cup/
 hambony ho an'i Frantsa: https://twitter.com/benmendy23/status/1019269986282598403
 ny nataon'ny: http://www.france24.com/en/video/20180718-barack-obama-praises-french-football-team-diversity-not-all-those-folks-look-like-gau
 tena Eoropeana avy any Kroasia no hitan-dry zareo ho akaiky azy kokoa: https://twitter.com/RenaudCamus/status/1017171355173781504
 nanoratra taratasy: https://www.theatlantic.com/international/archive/2018/07/french-american-identity-politics-world-cup-trevor-noah/565637/
 mari-panondroana maha-Afrikana azy: http://www.lepoint.fr/sport/macron-weah-et-mbappe-mobilises-pour-le-sport-en-afrique-21-02-2018-2196857_26.php
 nanambara iza omanaraka izao momba ny fifandraisan'ny ekipa amin'i Afrika: http://www.espn.co.uk/football/france/story/3565425/france-are-proud-to-represent-africa-in-world-cup-final-deschamps
 fomba fitenin'ny: https://edition.cnn.com/2018/07/18/opinion/france-world-cup-win-nationalism-opinion-intl/index.html
 elatra havanan'i Frantsa: https://www.marianne.net/societe/comment-le-debat-sur-lequipe-de-france-de-football-sest-racialise-depuis-1998
 tena Frantsay: https://www.theguardian.com/football/2006/jun/30/worldcup2006.sport3
 noho ny fanehoan-kevitra manavakava-bolonkoditra: http://www.espn.co.uk/football/germany/story/3571587/mesut-ozil-retires-from-germany-after-political-tensions-over-turkish-roots
 tamin'ny fifidianana ho filoham-pirenena taona 2002: https://en.wikipedia.org/wiki/French_presidential_election,_2002
 fisoloantena mainty hoditra: https://globalvoices.org/2018/07/20/because-were-here-because-we-exist-nofi-black-and-proud-challenges-representation-in-french-media/
 fanafahana an'i Frantsa: http://www.rfi.fr/afrique/20140814-france-tirailleurs-senegalais-africains-role-historique-premiere-seconde-guerre